दस वर्षदेखि ओछ्यानमै – NepalAustralianews.com
दस वर्षदेखि ओछ्यानमै
April 19, 2015 April 19, 2015 समाज
झट्ट हेर्दा ठीकठाक देखिन्छन्, सिमपानी–३ का २८ वर्षीय शम्भु तामाङ। तर, काखीमा घुस्रिएका दुई वैशाखीले उनको शारीरिक अपांगताको प्रमाण दिइरहेछन् । कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । दुवै खुट्टा सुकेर झिना भएका छन्।
२०६१ साल साउनदेखि छोराको कम्मरमुनिको भाग चल्न छाडेको आमा लक्ष्मी बताउँछिन् । उस बेला १८ वर्षका शम्भु कक्षा १० मा पढ्थे । बिहे गरेको एक वर्ष पनि बितेको थिएन । बेलुकीसम्म सकुशल रहेका पति बिहान उठ्दा अपांग बनेको पत्नी बबिता बताउँछिन् । ‘बेलुका सन्चै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘बिहान उठ्दा कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भएछ ।’
लक्ष्मी र शेरबहादुरका छोरा हुन् शम्भु । दस वर्षयता उनको धेरैजसो समय ओछ्यानमा पल्टिएरै बित्छ । दिसापिसाब गर्न पनि अरूको भर चाहिन्छ । पत्नी बबिता उनको स्याहारसुसार गर्छिन् । ‘अहिलेसम्म त बुबाआमा साथैमा हुनुहुन्छ, सबै घरधन्दा उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ,’ बबिता चिन्ता दर्साउँछिन्, ‘उहाँहरूको अन्त्यपछि म एक्लीले के गर्ने होला ?’ शम्भुका सात वर्षकी छोरी पनि छन् ।
छोरालाई उपचारका लागि राजधानीको शिक्षण अस्पताल, धरानको पुनःस्थापना केन्द्रलगायतमा लगिए पनि निको नभएको आमा लक्ष्मीले बताइन् । उपचारक्रममा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको उनले गुनासो गरिन् । ‘भएको सम्पत्ति सकियो तर निको भएन,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘पैसा सकिएकाले ओछ्यानमै बास भएको छ ।’ तीन छोरा र एक छोरी रहेको तामाङ परिवारमा आम्दानीको बलियो स्रोत केही छैन । ‘सरसम्पत्ति खर्च गरियो तर रोग बीसको उन्नाइस भएन,’ ओछ्यानबाटै शम्भुले भने, ‘अझै पनि उपचार पाए जाती हुन्थेँ कि !’
अपांग बन्नुपरे पनि शम्भुमा कलाक्षमता भने उर्वर हुँदै आएको छ । उनी बाँसको चोयाबाट सजावटका आकर्षक सामग्री बनाउन दक्ष छन् । ओछ्यानमै बसेर उनले चोयाबाट विभिन्न प्रकारका फूल, मन्दिर, घर, खेलौना तयार पारेका छन् । बबिताले चोया काटिदिन्छिन् । शम्भु त्यसलाई दुई हात र छातीको सहारामा विभिन्न आकार दिन्छन् । यही क्षमताका कारण शम्भुलाई केही समयअघि सिमपानीमा आयोजित खुलला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा सम्मान पनि गरिएको थियो । सम्मान थाप्न उनलाई स्ट्रेचरमा बोकेर कार्यक्रमस्थल ल्याइएको थियो । शम्भुको सीपलाई व्यवस्थापन गर्न सके गाउँमै बाँसबाट बन्ने सामग्रीको हस्तकला उद्योग विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको स्थानीय दिपबहादुर थापाले बताए ।
एउटै रुखमा पासो लगाएर तीन बालिकाद्वारा आत्महत्या
अपहरण र हत्याको तयारीमा रहेकोे समूह पक्राउ
यी आमाका पाँचभाइ छोरा कहाँ होलान् ?
स्वस्थको क्षेत्रमा १/२ दर्जन संग्संस्थाले काम गरिरहेको जाजरकोटमै किन महामारी ?
३२ दाँत र २४ औँला भएकी बच्चीको जन्म
हराएको फोन गुगलबाटै खोज्न सकिने